Mialona Ny Fiverenan’ny Media Tsy Miankina Ao Myanmar Ny Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Avrily 2013 5:06 GMT
Niteraka fialonana sy fangidiam-panahy teo amin'ireo olom-pirenena Shinoa ny fiverenan'ny gazety tsy miankina tao Myanmar taorian'ny tsy fisian'izany gazety izany nandritra ny dimampolo taona mahery. Manontany ireo Shinoa raha mba hanao tahaka izany ihany koa ny fireneny izay hentitra amin'ny fanaraha-maso ny media ao amin'ny firenena.
Taorian'ny vaovao notaterin’ny [zh] gazety Shinoa Beijing Times fa lafo daholo ny gazety tsy miankina efatra tao Myanmar raha vao tonga teny amin'ny toeram-pivarotana vaovao ny 1 Aprily 2013, niteraka adihevitra mafana teo amin'ireo media Shinoa hafa izany, torak'izany ihany koa ny tao amin'ny sehatry ny media sosialy malaza ao Shina.
Craig McIntosh, tonian-dahatsoratra ao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro China Daily, naneho hevitra tao amin'ilay bilaogy madinika malaza Sina Weibo:
Andro lehibe ho an'i Myanmar. Mandray anjara mavitirika amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ireo fahalalahana hafa ny gazety malalaka, tsy mitanila ary marina.
Pikan-tsary tamin'ny gazety tsy miankina ao Myanmar. Sary tao amin'ny fahitalavitra Shinoa Guangxi (avy amin'i youku)
Tonian-dahatsoratra hafa “Guilin Ribao Laona” nanoratra [zh] hoe:
Dingana kely ho an'ireo gazety tsy miankina, dingana lehibe ho an'ny demokrasian'ny firenena.
Na dia izany aza, somary masiaka ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra, izay hita fa diso fanantenana noho ny sivana atao amin'ny media ao Shina. Hoy i “Xianshi Wangtian” nanoratra [zh]:
Arahabaina ny vahoakan'i Myanmar. Milaza ihany koa ny lalàmpanorenana eto amin'ny firenenay fa manan-jo hanana gazety tsy miankina ho azy manokana ny olom-pirenena Shinoa, saingy rahoviana vao afaka hizaka izany zo izany ny olom-pirenena Shinoa araka ny voalazan'ny lalàna? Nofinofin'ny Shinoa izany, rahoviana vao ho tanteraka?
Mpisera iray miantso azy hoe “ShanghaiJuice” namaly hoe:
Tsy hoavy eto Shina mihitsy izany.
Ny iray hafa kosa naneho hevitra [zh] am-piesoesoana hoe:
Toa mankany amin'ny dingan'ny demokrasia i Myanmar, ka miha-vitsy hatrany ny naman'i Shina.
Mpaneho hevitra iray hafa antsoina hoe “Liushi Buhuo” nilaza [zh] momba izany fihetseham-po izany:
Taorian'ny folo taona mahery nisian'ny fanovana sy ny fisokafana, afaka nandresy antsika i Myanmar sy Vietnam, angamba ao anatin'ny roa taona, hihemotra lavitra noho i Kiobà isika, ka Korea Avaratra sisa no mba azo ampitahaina amintsika.
“Hujin Wenyu”, kosa nanoro hevitra [zh] hoe:
Koa raha izany, maninona raha manangana gazety Shinoa ao Myanmar?
Na dia izany aza, mpisera iray naneho fanantenana, ary nanoratra [zh] hoe:
Angamba toy izany ihany koa ny hoavin'i Shina? Saingy tsy fantatra hoe firy taona na firy am-polo taona no hahatongavan'izany.
22 ora izaySingapaoro